Inona ny tokony atao manoloana ny politikan'ny mpitondra?
2007-09-20 @ 15:57 in Politika
Fotoam-pifidianana isika amin’izao fotoana izao. Fifidianana izay ho solombavambahoaka hotanterahina amin’ny alahady 23 septambra 2007 ho avy izao. Nanambara tamin’ny vaovaony ny rfi androany maraina fa tsy mahasarika loatra ny fampielezan-kevitra tamin’ity indray mitoraka ity. Fambara tsara ihany izany ho ahy manokana.
Isaky ny mafampana manko ny fifidianana dia fikorontanana no tena andrasan’ny mpampita vaovao ho bizina ho azy. Isika rahateo aty amin’ny faritra eritreretina ho mora andairan’ny ady mandrakariva. Koa rehefa ireny mpampahalala vaovao ireny no miteny tahaka izany dia hanjaka kokoa izay ny filaminana.
Natsidiny koa tanatin’izany fa mety hanjaka tokana ny antoko eo amin’ny fitondrana amin’ity indray mitoraka ity. Mety ho marina tokoa izany nefa tsara fantarina ny anton’ny safidy, raha mbola lazaina ihany koa fa safidy ny dikan’ny vato narotsany amin’ny androm-pifidianana.
Voalohany, raha mahita ny nahazo ireo mahery loha , mpanohana ny fitondrana teo aloha lasa mpanohitra na mpanohitra ny fitondrana hatramin’ny voalohany migadra amin’izao fotoana izao, izay mieritreritra fa mafana fo sy malaza amin’ity resaka politika ity dia nitakemotra avokoa. Tsikaritry ny maro fa ny tena mpitarika ankoatra ny filohan’ny Antenimieram-pirenena teo aloha, Jean Lahiniriko, dia nisafidy ny tsy hirotsaka tamin’ity fifidianana ity. Ny mpitarika ny antoko lazaiko ho madinidinika no sahy mirotsaka hitsapa ny safidim-bahoaka mialoha ny dingana manaraka goavana kokoa.
Manaraka izany indray, izay mirotsaka rehetra tian’ny maro, nefa tsy mitovy tadin-dokanga loatra amin’ny fitondrana aty amin’ny foibe na sahy mifaninana aminy, dia efa miomana ny tsy hahazo na inona na inona avy aty, eny na dia ao anatin’ny zony tanteraka aza izy. Mahatsapa izany ny maro an’isa dia mionona hoe aleo fidiana izay avy any amin-dry zareo raha te-hanatsara ny tanàna misy ny tena. Ny dikan’izany dia terena ankolaka ny mpifidy handrotsa-bato ho an’ny antokon’ny fitondrana. Tsy demokraty mihitsy aloha ny mpitondra amin’ity lafiny iray ity. Moa tahaka izany koa ny any ivelany any? Ianareo any no mahalala.
Na izany na tsy izany dia tsy tsara ho an’izay mahazo fahefana na oviana na oviana ny manjaka tokana. Marina fa mikendry ny hahazo ny toerana 127/127 ny Tim saingy tsy mahasoa ny firenena na oviana na oviana izany. Efa fantatra ny fitilitilian’ny mpitondra ankehitriny ny fanaon’ny (mpitondra) Shinoa ka mampanahy be ihany ny mety ho fironana haingana mankany amin’ny jadona.(Izay fironana izay koa angaha no mahatonga ahy ho somary liana kokoa amin’izay mitranga any amin’ny Tatsinanana Lehibe any). Etsy andanin’izany efa nosoratako eo ambony io ny teti-panoron’ny mpitondra hahazoany ny maro an’isa. Inona ary no tokony atao? Ary aiza izany no tsara atao? Antananarivo no vahaolana.
Tsy maintsy arovana ny demokrasia na dia sarotra aza ny hahazoana fifandanjan-kery. Ny hery mifandanja no mahasalama ny demokrasia hanajana ny fahalalahan’ny tsirairay. Hanahirana ny hahazoana izany amin’izao fotoana izao saingy tsy tokony hahafoana ny tsirim-panantenana izany. Ivereno an-tsaina ny nitranga tamin’ny repoblika voalohany (ho an’izay efa niaina izany).
Tamin’ny ankapobeny dia roa monja ny avy amin’ny antoko mpanohitra tao amin’ny antenimieram-pirenena nefa tsy sahin’ny teo amin’ny fitondrana loatra ny nikitikitika ireo olona roa ireo. Antananarivo manko no nifidy ireo ka mety hitarika zavatra hafa tsy ampoizina raha misy maninomaninona manjo azy ireo (tadidio fa ambenan’ny mpiray antoko aminy mandrakariva ry zareo ireo rehefa mivoaka an’Antananarivo ary voatery nifindra fiara matetika hialana amin’ny vela-pandrika hafahafa mody hoe notafihin’ny jiolahy na…). Nanam-pahalalàna hiteny any ambadika ny olona na dia mody jomoka eo anoloana aza.
Ankehitriny, fianatra ny tantara ary fantatry ny mpitondra tsara izany matoa izy nandrotsaka minisitra hofidiana. Ny fahazoana ny fon’Antananarivo ihany no lakilen’ny fitazonana ny fitondrana. Na dia azonao daholo aza ny seza rehetra any amin’ny faritra nefa tsy nahazoana mihitsy Antananarivo dia efa mahazo mangovitra ianao ny amin’ny fitondrana tarihinao. Tsy sanatria fanaovana zinona ny vaton’ny any amin’ny faritra fa fitaratra mandrakariva izay ataon’Antananarivo amin’ny resaka politika. Na dia noezahina mandrakariva aza ny nampifandrafy ny mponin’Antananarivo amin’ny faritra ivelan’Antananarivo tsy mahafoana ny mahairay ny Malagasy izany. Eto Antananarivo avokoa ny foko rehetra misy eto Madagasikara ary ireo no tady mampifandrohy ny fifandraisan’I Madagasikara iray manontolo.
Etsy ankilan’izany tsy ho afaka ny hanao kinanga na oviana na oviana ny mpitondra rehefa eto ka sahy hanao hoe rehefa tsy hifidy an-dranona ianareo dia tsy hisy asa vita eto. Tsy maintsy manao zavatra eto izy raha mbola te-hitoetra maharitra eo amin’ny fitondrana nefa tsy ho afaka ny hanery ny vahoaka amin’ny safidiny, hafa ny any amin’ny faritra ary hafa ny eto Antananarivo. Noho izany, Antananarivo irery aloha no fantatro hatramin’izao mahazo mifidy olona hafa amin-kahalalahana tsy avy amin’ny fitondrana nefa tsy hokarakaraina. Fihantsiana mivantana avy hatrany raha sahy manao izany ny eo amin’ny fitondrana. Ny olana iray lehibe eto dia tsy mety mahazo ny fon’Antananarivo ny avy amin’ny fanoherana. Aiza ho aiza ny tokony atao?
Na dia roa isaky fari-pifidianana aza manko ny eto an-drenivohitra dia tsy misy hoe maro an’isa ifampizarana ny handaniana ireo na maro an’isa izay manana ambim-bato betsaka. Izay betsaka isa kokoa fotsiny no tonga dia mahazo ny seza roa na dia mety ho vato tokana monja aza ny elanelana eo amin’ny voalohany sy ny faharoa. Ny hafa ihany koa tsy mahay mifanaraka no sady tsy sahy nirotsaka loatra, hoy aho tetsy ambony, ny Oloben’ny politika eto amin’ny firenena. Ny olona no mitaratra dia mifidy mangina any anatiny any. Ankoatra ny fanatikan’ny fitondrana dia maro (amin’izay manodidina ahy na sehatra aiza io na sehatra aiza, na manaiky imaso fotsiny ihany koa izay iresahako) no mieritreritra fa tsara raha mifidy olona hafa tsy ao amin’ny antokon’ny mpitondra ankehitriny ny olona saingy tsy mety loatra raha avy amin’ny fanoherana bontolo ireo olona ireo. Ho fiarovana ny demokrasia no anton’izany fa tsy noho ny safidy manokana.